Ko Aung Hmine - Poem
15th April - MoeMaKa Radio
Lizstar သင်္ဘောသားများပျောက်နေတဲ့ ဒေါ်လာ (၂) သန်း
စက်တင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃
ကျွန်တော်တို့သည် Lizstar Shipping က ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန်ယူထားသော Setsuyo Kisen Co.,Ltd ပိုင်ဆိုင်သော သင်္ဘော များပေါ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ၀န်ထမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ Setsuyo Fleet တွင် မြန်မာများ တာဝန်ထမ်းဆောင်သော သင်္ဘော (၁၄) စီး ၇ှိပါသည်။
Lizstar Shipping ကတာဝန်ခံထားသော ဂျပန်ကုမ္ပဏီ(၂)ခု ၇ှိပါသည်။
(၁).Setsuyo Kisen co.,Ltd (Setsuyo Fleet)
(၂).Daiichi Chuo Marine (DCM Fleet) တို့ ဖြစ်ပါသည်။
လစာပေးပုံစနစ်မှာ Setsuyo နှင့် DCM ကုမ္ပဏီ(၂)ခုမှ လစဉ် လကုန်ရက်တိုင်း သင်္ဘောသားများ၏ လစာငွေကို Lizstar Shipping ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းဇော်၏ Bank Account သို့ ၁၀၀% (မပျက်မကွက်) လွှဲပေးပါသည်။ (ဂျပန်ကုမ္ပဏီများဘက်မှ တာဝန်ကျေပါသည်။) ဦးဝင်းဇော်မှ တဆင့် သိမ်ဖြူလမ်းရှိ Myanmar Apex Bank တွင် ဖွင့်ထားသော Lizstar သင်္ဘောသားများ၏ Bank account များသို့လွှဲပြောင်း ပေးရန် ၂၀၁၃ မေလ(၁၄)ရက်စွဲဖြင့်(စာရှုရန် ပူးတွဲတင်ပြထား) ကတိကဝတ်ပြု ထားသော်လည်း ၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လစာ၊ ဇူလိုင်လစာ၊ ဩဂုတ်လစာများ ကို ၂၀၁၃ စက်တင်္ဘာလ(၁၂)ရက်နေ့ အထိ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ သင်္ဘောတစ်စီးတွင် သင်္ဘောသား အယောက်(၂၀)ခန့် တာဝန်ထမ်းနေပြီး တစ်လလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ လေးသောင်း (၄၀,၀၀၀) ခန့် လစာရှင်းပေးရပါမည်။
(၃)လစာဆိုလျှင် သင်္ဘောတစ်စီးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သောင်း၊နှစ်ထောင်(၁၂၀,၀၀၀)ခန့်လစာရှင်းပေးရမည်ဖြစ်ပြီးSetsuyo Fleet လက်အောက်တွင် သင်္ဘော(၁၄)စီးရှိရာ စုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သန်း၊ခြောက်သိန်း၊ ရှစ်သောင်း(၁,၆၈၀,၀၀၀)ခန့် Lizstar shipping နှင့် ၎င်းကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းဇော်မှ ပေးဆပ်ရန် ပျက်ကွက် နေပါသည်။သင်္ဘောမှ တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်နေသော သင်္ဘောသားဦးရေ (၁၀၀)ခန့် ကိုလည်း(၃)လစာ ပေးချေရန် အကြွေးရှိပါသည်။ထိုတန်ဖိုးများစုစုပေါင်းလျှင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှစ်သန်း(၂,၀၀၀,၀၀၀)ကျော် ပေးချေရန် ပျက်ကွက် နေသည်။၎င်းငွေပမာနကို ဂျပန်ကုပ္မဏီ နှစ်ခုဖြစ်သော Setsuyo Kisen နှင့် Daiichi Chuo Marine တို့ မှ Lizstar ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းဇော်၏ စင်္ကာပူရှိ Bank Account သို့ လွဲပြောင်းပေးပြီးဖြစ်ရာ ဒေါ်လာ(၂)သန်းကျော်ကို ၎င်းမှ လှည့်ပတ်သုံးစွဲ ထားကြောင်း ပေါ်လွင် နေသည်။
လစာ၏ ၁၅ % ခန့်ဖြစ်သော စရံငွေကိုသာ ဇွန်၊ဇူလိုင်လများအတွက် သင်္ဘောပေါ်တွင် ( ၂၀၁၃ စက်တင်္ဘာလ(၁၂)ရက်နေ့ အထိ ) စတိအဖြစ် လက္ခံရရှိကြပါသည်။ သင်္ဘောပေါ်တွင် စရံ (၇)ကြိမ် ခန့်ထုတ်ပေးမှ လစာအပြည့် (၁)ကြိမ် ရခြင်းနှင့် ညီမျှသည်။ထို့ ကြောင့် သင်္ဘောသားများ၏ မိသားစုများမှာ ကြီးမားသော အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ကာ ဖောင်စီးရင်း ရေငတ်ဖြစ်ရပါသည်။ရန်ကုန်ရှိ မိသားစုများမှ လစာငွေ လွှဲပြီး၊မပြီး ရန်ကုန်Lizstar ကုမ္ပဏီတွင် စုံစမ်းသောအခါတွင်လည်း မချေမငံ ဆက်ဆံခံကြရပါသည်။ ဆက်ဆံရေး လွန်စွာညံ့ဖြင်းသော ငွေစာရင်း မန်နေဂျာအမျိုးသမီး အား တမင်ရည်ရွယ် ခန့်ထားပြီးရန်တွေ့စေပါသည်။ Lizstar ကုမ္ပဏီမှ တိကျခိုင်မာသော လစာရှင်းတမ်း Payment Bill များကိုလည်း သက်သေအထောက်အထား ဖြစ်မည်စိုး၍ မည်သည့်အခါမျှ သင်္ဘောသားများအား ထုတ်ပေးခြင်းမရှိပါ။
သင်္ဘောသားများ၏ လစာငွေထဲမှလစဉ် ဒေါ်လာ(၃၀)ကို Japan Seaman Union (JSU) ကြေး အဖြစ် Lizstar ကုမ္ပဏီမှ ဖြတ်ယူထားပြီး ထိုငွေများကို JSU သို့ အမှန်တကယ် ပေးသွင်းခြင်းမရှိပါ။ ထို့ ကြောင့် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လာသော သင်္ဘောသားများအား JSU၏ပင်စင်လစာ အာမခံလက်မှတ်ကိုLizstar ကုမ္ပဏီမှထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ သင်္ဘော(၁၄) စီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော စုစုပေါင်း သင်္ဘောသား (၄၀၀)ခန့် ရှိရာ တစ်ဦးကို တစ်လ ဒေါ်လာ(၃၀)ဖြတ်ယူထားလျှင် တစ်လလျှင် ဒေါ်လာ(၁၂,၀၀၀)၊တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာတစ်သိန်းခွဲခန့် (၁၄၄,၀၀၀)ကိုLizstar shipping နှင့် ၎င်းကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းဇော်မှဖြတ်ယူ၍ နှစ်ပေါင်းများစွာ အလွဲသုံးစား လုပ်ထား ပါသည်။ ထို့ ကြောင့် အသက်ပြည့် အငြိမ်းစားယူသောအခါ မည်သည့် Lizstar သင်္ဘောသားမျှ Japan Seaman Union(JSU) မှထုတ်ပေးသော ပင်စင်လစာ မခံစားကြရပါ။
သင်္ဘောသားများနှင့် စာချုပ် ချုပ်လျှင် မမျှတသောစာပိုဒ်များထည့်သွင်းကာ ကုမ္ပဏီမှ တဘက် သတ်အသာစီးယူ ချုပ်ဆိုပြီးအိမ်ဂရံ (သို့ ) တိုက်ခန်းစာချုပ် အပေါင်ပေးထားခဲ့ရပါသည်။
တဖန် ၂၀၁၃၊ စက်တင်္ဘာ(၃)ရက် နေစွဲဖြင့် Lizstar ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းဇော်မှ ဇာတ်လမ်းသစ် ထွင်လာပြန်သည်။ Myanmar Apex ဘဏ်သို့ လစာများလွဲပြောင်းပေးသော စနစ်ကို “ခေတ္တဖျက်သိမ်း” ကြောင်း၊သင်္ဘောပေါ်တွင် လစာပေး သောစနစ်သို့ ပြန်ပြောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာချက် (စာရှုရန် ပူးတွဲတင်ပြထား)ထုတ်လာပြန်ပါသည်။ ၎င်းကြေငြာချက်ကို သင်္ဘောပိုင်ရှင် ဂျပန်ကုမ္ပဏီ(၂)ခုမသိစေလို၍ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ များသို့မိတ္ထူ(Carbon Copy) ပေးပို့ ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းကြေငြာချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ
(၁) ရန်ကုန်Lizstar ရုံးတွင် လစာလာရောက် တောင်းဆိုသော သင်္ဘောသားမိသားစုများအား ဥပါယ်တမျှင်ဖြင့် ရှင်းထုတ်လိုခြင်း။ (၂) မရှင်းပေးနိုင်သော လစာများအတွက်(စနစ်အလှည့်အပြောင်းကြောင့်ဟုဆိုကာ) အချိန် ထပ်မံဆွဲ လိုခြင်း။ (၃) အငယ်တန်း သင်္ဘော သားများ(သင်္ဘောတစ်စီးလျှင် ၁၀ ဦးရှိ)၏ လစာထဲမှ တစ်ဦးကို တစ်လလျှင် ဒေါ်လာ(၂၀၀) (အကြောင်းပြချက် အမျိုးမျိုးဖြင့်) ဖြတ်ယူထိမ်းထားပြီး အခြားလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးထား လိုခြင်း။ MLC 2006 ဥပဒေ အရ ကုမ္ပဏီက ထိုငွေကို ထိမ်းသိမ်းထားပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ တွက်ချက်မှုအရ(ဒေါ်လာ၂၀၀ x ၁၀ဦး x ၁၄စီး x ၁၂လ=ဒေါ်လာ၃၃၆,၀၀၀)၊ တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ သုံးသိန်းခွဲခန့်အခြားလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးထားခြင်း(သို့ မဟုတ်) အတိုးဖြင့် ထုတ်ချေးထားနိုင်ကြောင်း တွေ့ ရှိနိုင်ပါသည်။
Maritime Labour Convention:MLC 2006 ဥပဒေ အရ Standard A2.2 – Wages, Paragraph(1) တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော သင်္ဘောသားများ၏ လစာငွေကို လစဉ်လတိုင်း ပေးချေရန် ပြဋ္ဌာန်းထားသော် လည်း Lizstar ကုမ္ပဏီမှ ဦးဝင်းဇော်က ဥပဒေကို စနစ်တကျ ချိုးဖောက်နေပါသည်။
MLC,2006 Standard A2.2 – Wages, Paragraph(1) တွင် အောက်ပါအတိုင်းပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။
တ်ိကျခိုင်မာသော သတင်းရင်းမြစ်ဖြစ်စေရန် Lizstar ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်ပြန်သော ကြေငြာချက်များ ကို လည်းပူးတွဲ တင်ပြထားပါသည်။
မှန်ကန်မှုရှိလျှင် ရဲရင့်မှုလည်း ရှိရပါမည်။ အထက်ပါ အကြောင်းအရာများကို ခိုင်မာသော အထောက်အထားများဖြင့် မှန်ကန်သောမီဒီယာများ ရှေ့မှောက်တွင် Lizstar Shipping ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းဇော်မှ ရှင်းလင်းစေလိုပါသည်။ Lizstar Shipping ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဋ္ဌ ၏ “ဒေါက်တာ”ဘွဲ့ ကိုလည်း မည်သည့်တက္ကသိုလ်မှ အမှန်တကယ်ရရှိခဲ့ကြောင်း သက်သေပြ မှတ်ကျောက်တင်စေလုိုပါသည်။ဤစာစုကှိုိ သင်္ဘောသားများ၊သင်္ဘောလိုက်ရန်ပြင်ဆင်နေသော ညီငယ်များနှင့်မိဘပြည်သူများ ဖတ်ရှုပြီး ဆိုးညစ်သော ကုမ္ပဏီများ၏ လှည့်ဖျားခြင်း မခံရစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။စုံစမ်း စစ်ဆေး လိုသော မီဒီယာများအနေဖြင့် အောက်ပါ လိပ်စာ၊ဖုံးနံပါတ်၊အီးမေးများသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါသည်။
ဟီရိဩပတ္တိတရား ထွန်းကားစေလိုသော မြန်မာသင်္ဘောသားများ (Myanmar Setsuyo Seafarers )
Lizstar Shipping Co.,Ltd
No.77, Corner of 54th Street & Botahtaung 3rd Lane,
Tel:+95(1)202654, 297197, 297706, 8610160
Email: “Dr.Win Zaw”drwinzaw@lizstargroup.biz, lizstarygn@lizstargroup.biz
Myanmar Apex Bank (TheinByu)
No.(207), Thein Phyu Road (Middle) Block, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar.
Tel: +95 (1) 398801~07,+ 95 (1) 398811~819 Email: enquiry@mabbank.com
Setsuyo KisenCo., Ltd ဂျပန်ကုမ္ပဏီ တာဝန်ခံ မန်နေဂျာ
Mr. Hirofumi Sakanoue
Email:“Hirofumi Sakanoue”hirofumi_sakanoue@setsuyokisen.co.jp Daiichi Chuo Marine Co., Ltd ဂျပန်ကုမ္ပဏီ တာဝန်ခံ မန်နေဂျာ
Mr. Fujita Tel: +81-03-3523-8856 Email:“Fujita San”